यस कारण जाडोमा उपयोगी छ भ्यासलीन
एजेन्सी । मुलुकभर जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ । यस्तो जाडो मौसममा अनुहार, हातगोडा र ओँठका लागि हामी धेरैले भ्यासलीन प्रयोग गर्छौं । विस्तृतमा
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खतरायुक्त
सुर्खेत । शनिबारदेखि जुम्लामा अनशनरत हाडजोर्नी चिकित्सक डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य खतरायुक्त अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
शरिर 'फिट एण्ड फाइन' राख्न चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुराहरु खानुहोस्
यसकारण धेरै खुशी पनि नहुनुहोस्
काठमाडौँ । एक अध्ययनका अनुसार धेरै खुसी हुनु पनि मुटुको लागि खतरा हुने स्वस्थ्य बिशेषज्ञहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
भिन्डी खाँदा यस्तो १० आश्चर्यजनक फाइदा
हरियो शब्जी भिन्डी खाँदा स्वास्थ्यलाई धेरै फायदा पुर्याउँछ । यहाँ हामीले भिन्डी खाँदा हुने १० फाइदाको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
अप्रेशन गरेर बच्चा जन्माएका महिलालाई हुनसक्छ यस्तो खतरा
एजेन्सी । बच्चा जन्माउँदा गरिने ‘सीजरियन सेक्सन डेलिभरी’ (अप्रेशन गरी बच्चा जन्माउने) लाई लिएर विभिन्न्न भ्रम सुन्न पाइन्छ, ।
मेक्सिकोमा ६ महिनामा आठ पत्रकारको हत्या
मेक्सिकोमा यसवर्ष कम्तीमा पनि आठजना पत्रकारको हत्या भएको छ । यसरी हत्या भएका आठौँ पत्रकारमा जोसे गुडालुपे चान परेकाे मेक्सिकोबाट प्राप्त समाचाराम जनाइएको छ ।
भूकम्पपीडित कार्कीका दुवै मिर्गौला बिग्रेपछि
काठमाडौँ । भूकम्पपीडित रमिता कार्कीका दुई मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि परिवारमा दुःख निम्तिएको छ ।
क्यानसरबाट जोगिन यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस्
क्यान्सर रोगको प्रमुख कारक सूर्तिजन्यपदार्थ हो । कसैले यसले फोक्सो र मुखको क्यान्सर मात्रै बनाउछ भन्ने गरेको सुनेको छु । तर त्यो गलत हो ।
बिहानै तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खानुहोस्, मिल्नेछन् यस्ता फाइदा
मुकेश अम्बानीकी श्रीमती नीता अम्बानीको सारी, जुन ‘गिनीज वल्र्ड रेकर्ड’ मा दर्ता भयो
एजेन्सी । व्यवसायी अर्थात एसियाकै सबैभन्दा धनिको सूचिमा रहेका मुकेश अम्बानीका छोरा आकाश अम्बानीले गोवामा ‘प्री–इनगेजमेन्ट’ गरेका छन् ।